नेपालको नम्बर 1
सीमेंट उत्पादन कम्पनी
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड बी.एस. २०३३ अश्विन १३ मा कम्पनी अधिनियम २०२१ को तहत स्थापित भएको छ, एचएमजी / नेपाल को एक उपक्रम हो। संयंत्रमा २६०००० लाख टन सिमेन्टको वार्षिक उत्पादन क्षमता छ र एशियाई विकास बैंक बाट ऋण सहयोगको साथ स्थापित गरिएको थियो। यसले डिसेम्बर १९८० देखि यसको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्यो।
सीमेंट मशीनरी र मोबाइल खनिज उपकरण को आर्थिक जीवनक्रमश: १८ र ५ वर्ष को छ। वित्तीय वर्ष २०४२/४३ मा सीमेंट उत्पादनको सुरुवात गर्दै, लगभग सबै मिसिनहरु पुन: पुनर्वास चाहिन्छ, जुन ठूलो पूंजी चाहिन्छ। यसैले, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा पुनर्वास कार्य गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा जलसेवा प्रणाली र खनिज उपकरणहरूको भाग पुनर्स्थापित गरिनेछ। साथै, ई.एस.पी ग्रेटर कूलर र चक्रवातको पुनर्वासको लागि एक अध्ययन गरिनेछ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड आफ्नो स्रोतको साथ र घरको विशेषज्ञतामा ओखारे खरिदमा विकास कार्य सुरू गरे जुन राम्रो चूना पत्थरको राम्रो ग्रेड रहेको छ र अर्को वित्त वर्षमा मुख्य खरिदबाट चूना वितरण गर्न योजना बनाईएको छ।
मानिसलाई जन्मने वित्तिकै वासको आवश्यकता भएकै कारण सिमेण्ट मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्दै आईरहेको छ । हरेक मानिस एउटा राम्रो रब बलियो घर बनाउने सपना हुन्छ त्यसको पुर्णताको लागि गुणस्तरीय सिमेण्ट उस्को पहिलो प्राथमिकता हुन जान्छ । न्यून गुणस्तरको सिमेन्ट प्रयोगबाट उस्को जीवनभरको कमाई र सपना निश्फल हुन सक्ने हुँदा आफ्नो सपना साकार पार्नको लागि गुण्स्तरीय सिमेन्टको आवश्यकता पहिलो शर्त हुन आउँदछ ।
सार्वाधिक गुणस्तरयुक्त रहेको ।
प्रविधिक र उपयोगको दृष्टिले साह्रै उपयुक्त रहेको ।
नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा संचालित रहेको ।
मकवानपुर जिल्लाभरि सिमेण्टको सहज उपलब्धताको लागि पहेलो बोरामा र अन्य क्षेत्रको लागि सेतो बोरामा प्याक गरी बिक्री वितरण गर्ने गरिएको ।
सामाजिक उत्तरदायित्व स्वस्प हेटौंडा नगरपालिका र गाविसहरुमा विभिन्न सामाजिक संघ संस्था मार्पmत उल्लेख्य सहयोग पु¥याएको ।
नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरको तथा निर्धारित परिमाणमा छ, छैन ।
डल्ला वा गिर्खा भए, नभएको ।
जलवास्प रहित भए, नभएको ।
गिट्टि, बालुवा, पानी उपयुक्त भए नभएको ।
सिमेण्ट उपयोग पश्चात नियमित भिजाउने (Curing) व्यवस्था बारे ।
दक्ष प्राविधिक सहयोग रहे, नरहेको ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट "शक्ति" ब्राण्डको OPC सिमेण्टको गुणस्तर चिन्ह "(NS/49-2041) प्राप्त गर्न सफल रहेको ।
आफ्नै स्वामित्वमा प्रचुर मौजदात र गुणस्तर सहितका चारवटा चुनढुङ्गा खानीहरु रहेको जस्ले गर्दा गुणस्तर कायम गर्न प्रशस्त विकल्प रहेको ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुको अतिरिक्त जर्मन स्तरको मापदण्ड (DIN-1164 PZ 35F) अनुसार समेत नियमित गुणस्तर परीषण गर्ने गरिएको ।
तोकिएको तौलमा नै उपलव्ध हुने गरेको ।
उपरोक्तानुसार उल्लेखित बुँदाहरु उच्चतम् सावधानीका साथ कायम गरेको ।
निरन्तर रुपमा उपभोक्ताहरुको रुचीलाई ध्यानमा राखी एकनासको गुणस्तरीय उत्पादन दिन सफल रहेको ।
सिमेण्टको भारवहन क्षमता उच्च रहेको ।
सिमेन्टको मिहीनपना बढी भएको ।
Free CaO, MgO, Sulphates, Alkalies न्यून भएको ।
सामान्यतया जम्ने समय २ देखि ३ घण्टा रहेको ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको ।
गुणस्तरीयचुनढुङ्गा, रातोमाटो जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थको सदुपयोगगर्नु ।
रोजगारीअभिबृद्धि गर्नु ।
नवनिर्माणकोलागि सिमेण्ट जस्तो आधारभुत सामाग्रीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु ।
सिमेण्टआयातमा यथासंभव कटौंती गरी देशको सोधनान्तर स्थिति सुदृढ गर्नु ।
राजस्वमाबृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुद पार्नु ।
नेपाल सरकार शेयर पूंजी
प्रकाशित शेयर पूंजी
भुक्तान गरिएको शेयर पूंजी
लाइसेन्स न. १५९९/५४ ९०३६
कुल क्षेत्रफल : १.५३ वर्ग किमि
ओखरे / मजुवा
लाइसेन्स न. १५०/२३२/०४२
कुल क्षेत्रफल :२४ वर्ग किमि
लाइसेन्स न. १४८७/३९३/०३२
कुल क्षेत्रफल :१.३० वर्ग किमि
वार्षिक कच्चा सामग्री आवश्यकताहरू
३९६००० मेट्रिक टन
२०००० मेट्रिक टन
५०००० मेट्रिक टन
१२००० मेट्रिक टन
४००० मेट्रिक टन